पार्टीको भातृ संगठनको बनभोजमा नगर प्रहरीको दुरुपयोग भएकोमा सर्वत्र निन्दा ! – ebaglung.com
२०७५ कार्तिक २८, बुधबार १९:१९	Top News, थप समाचार
बुर्तिवाङ २०७५ कात्तिक २८ । ढोरपाटन नगरपालिकामा नगर सुरक्षाका लागि नियुक्त गरिएका नगर प्रहरीहरुलाई निजी काम र पार्टीका कार्यक्रमहरुमा दुरुपयोग गरेपछि सर्वत्र आलोचना र निन्दा गरिएको छ । नेकपाको भातृ संगठन नेकपा युवा संघको आयोजनामा हिँजो सम्पन्न बनभोज कार्यक्रममा नगरप्रहरीहरुलाई डे«समै प्रयोग गरिएपछी बुर्तिवाङमा यस विषयमा तीब्र प्रतिकृया भएको छ । विभिन्न मिडिया एवं सामाजिक संजालहरुमा समेत यसलाई लिएर चर्कोे टिप्पणी सुरु भएको हो ।
ढोरपाटन नगरपालिकाको नगर सुरक्षाको लागि भन्दै २ महिना अगाडि मात्र नगरपालिकाले ५ जना नगर प्रहरीहरुको नियुक्ति गरेको थियो । नियुक्ति भएदेखि नै नगरप्रहरीहरु अधिकांश समय व्यक्तिगत घरको सरसफाइ गर्ने, कार्पेट विछ्याउने, झाडु लगाउने, कुर्सी टेबुल सफा गर्ने, अतिथि सत्कार गर्ने, घर निर्माण कार्यमा खटिएका कामदारहरुलाई सहयोग गर्ने, गाडी धुने लगायत निजी काम र पार्टीका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा खटाइने गरिएपछि यतिबेला सर्वत्र आलोचना बाहिर आएको हो ।
केही दिन पहिला हटियामा आयोजित गल्कोट महोत्सवमा जाँदा नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले नगर प्रहरीहरुलाई साथमै लिएर गएकोमा पनि टीका टिप्पणी भएको थियो ।
एकातिर बुर्तिबाङ बजार क्षेत्र र नगरपालिका भित्रका हरेक कार्यहरु अस्त व्यस्त छन् भने अर्काेतिर नगर सुरक्षाको लागि भनी नियुक्त गरिएका नगर प्रहरीहरुको यसरी दुरुपयोग गर्दा राज्य कोषकै दुरुपयोग भएको छ । नगरपालिकाले राज्यकोषबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने नगर प्रहरीहरुको काम कर्तव्य के हो ?उनीहरुको जिम्मेवारी के हो ? उनीहरुको प्रयोजन र कार्यक्षेत्र के कति हो ? के उनीहरु निजी कर्मचारी हुन् ? के सार्वजनिक सेवाको पद धारण गरेको व्यक्तिले आफू खुसी जे गरेपनि हुन्छ ? स्थानीयवासी र आम नागरिकहरुले यति बेला नगरप्रमुख नेपाली समक्ष यिनै प्रश्नहरु गरिरहेका छन् ।
चुनावको समयमा राज्यकोषबाट आफूले कुनै सेवा सुविधा नलिने प्रतिबद्धताको स्मरण गराउदै नगरबासीले नगरपालिकालाई अनावश्यक व्ययभार हुने गरी कर्मचारी नियुक्त गरी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागी प्रयोग नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
केही समय पहिला नगरपालिकाको आफ्नै कार्यकक्षभित्र पार्टीको प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलाएकोमा विभिन्न मिडिया र सामाजिक संजालमा नगरप्रमुख नेपालीको तीब्र आलोचना गरेका थिए ।